Arrimaha iPhone Security Waa in aan ogaado
Sidaas daraadeed waxaad u malayseen arrimaha ammaanka ahaayeen gaar u gmail, low-dhamaadka iyo qalabka oo keliya baa? Waxaan neceb inay tani jebin inaad laakiin nasiib daro waxaa run ma aha, taas oo macnaheedu yahay qalab Apple noqon kartaa qarka u ah cillad halis ah, waxaad keeni degaya aan go'aynin. Hadda 'jabsiga' iyo 'xayeysiis pop-up' ayaa ka dhigay waxyaabo ka xun, aad iPhone waa baahi wayn u qabaan ilaalinta xoog. Iyo dhibanayaasha si lama filaan ah kuma koobna arday ama tacsida sheeko xumeeyay, laakiin waxaa ka mid ah khubarada iyo sidoo. Dhab ahaantii, baddalay kaliya password kaliya ma aha fure u tahay wax walba. Si fudud u dami oo ku noqo meesha aad ka bilaabay.
arrimaha amniga iPhone in dad dan ugu
Sababta iPhone heysta meel gaar ah oo aad qalbiga ka yahay inta badan, sababtoo ah codsiyada qaar ka mid cajiib ah in aad ku raran yihiin in qalab aad. Waayo, kulli kuwa ugu waaweyn, waa arrin relatable marka aynu ka nidhaahno sida ay u kaydiso war qarsoodi ah oo gaar loo leeyahay sida sirta ah in websites, xisaabiyo tirada, sawiro, videos, mails shirkadaha, taariikhda browser goobidda iyo wax weyn oo ah in aad u xiiseeyaan. Tan iyo markii iPhone sii xariirta versions iyo mid qalab siinayaa si ay u soo galo oo kale, waana ay adag tahay in la yidhaahdo oo ugu wanaagsan waa ay fog. Qalab kasta oo cusub yimaado gobolka-of-the-tahay qaababka qaarkood in dhaafo horreeyay. Inta badan, dad tiro yar ayaa sheegaya in lagu daydo 'hore waxa uu ahaa si fiican wax yaabo in ay racfaan iyaga, oo ma ay hab aan sameeyo si ay kuwa hadda.
Maxaa guud ahaan dadka daryeela waa ku tuureen arrinta xatooyada, ilaalinta password jabsiga; Chine ammaanka iyo antivirus in ay dareemaan karnaa ay iPhone uruursanayey talooyinka kor ku xusan inta kale ah. Ilaa iyo inta arrimahan loo arko in, wax dhici meel ilaa xad ah.
Wax ka qabashada arrimaha amniga iPhone
Marka la barbar dhigo kooxda ay xafiiltamaan, iPhone mar walba fursad uu ku faano waxa ay la eego haya'ad ammaanka helay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiri kara hanjabaad ka abuuray laftiisa Apple. Sidaas macna kuu weecan doonta in ka badan si ay Android ama Windows? Maya Waxaa jiri kara yaqiinsanayn lagu hubinayo ammaanka dhamaystiran oo gaarka ah laga kasta oo ka mid ah bixiyaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaad dooran kartaa in la rakibo barnaamijyadooda yar ama aad dhaqaajiso muuqaalada in aad qalab si ay arrimaha ammaanka qaban. Wax walba ha ahaatee waa, ma joogo oo dhan lagu daydo, lakiin eegno waxgarashada qoto dheer:
Sahlo Lock Password aad iPhone
Masixi dhammaan macluumaadka ka hor inta uu ku soo laabto, dayactirka ama gadista aad iPhone
Si joogto ah u cusboonaysiiso iPhone ee firmware
Faham in aad JAILBREAK ama ma
Xayiraad yar Set
Muuqaalada Disable in laga heli karo iyada oo aan galaya code pass
Sahlo Barnaamijka Adda
Sahlo Raadi aan iPhone
Isticmaal ID Touch
Isticmaal qalabka oo keliya ku kalsoon tahay
Ula dhaqan arrimaha gaarka ah leh daryeelka inay design aasaasiga ah iPhone lagugu leeyahay
Isticmaal Bluetooth, Wi-fi, email iyo goobaha kale ee sida warbaahinta bulshada iyo si ammaan ah sida
Ka dheerow-pop baaritaan
Si joogto ah cusboonaysii iPhone
Inkasta oo ay jiraan siyaabo badan oo kale oo la siinayo ammaan oo dheeraad ah si aad u iPhone, hubi in aad aragto qalabka aad isticmaalayso u caawin doona in aad ogaado wixii kugu waajib ah in la sameeyo.
Ka fogaanshada dhibaatooyinka ammaanka iPhone in aad naftaada ilaaliso
Ma ogtahay macruufka la kulmin weeraro 'Forbes ayaa' in karnaa aad telefoon oo curyaan ahaa iyo in aan la iloobin, waxaad? Techies iyo khabiiro ka shaqeeya ku salaysan, kuwaas oo si joogto ah ay ku adkaysato muhiimadda ay leedahay sii joogi iska barnaamijyada nugul. Waxaad dhahdaa tusaale ahaan, daalacashada qatar ah sida qoraalkii ka weyn ee Chrome, hoomboro, Opera, Safari on OSX (Mac) ka dhigi kartaa wax aad u adag. Waxaad isku dayi kartaa oo isticmaalaya Firefox on OS X ore Chrome on macruufka ah ee natiijada fiican.
Eoo ayaa waxaa idin kor saaran si looga hortago khataraha amniga heli dhaantaa aad. Waa la fahmi karo oo aan wax walba waa xakamayn karno Laakiinse ay xajiyaan akhriska iyo helo aqoon ku filan oo ku saabsan sida aad u ilaaliyo kartaa telefoonka ka dhacaan dhibaatooyinka ka jira dunida internetka. Sida badan sida aan soo gudubtay xilligii macluumaadka, waxaa jira hanjabaad u ifaaya. Cayayaanka ammaanka ayaa saameeyey malaayiin nafood, taas oo ah sababta aad u baahan tahay in ay ka digtoonaadaan ee dhibaatooyinka iyo kasban hab ilaalo wanaagsan. Haddii wax falayaal cadeeyo xitaa markaas, si fudud u nasan aad telefoon ama booqo garaash aad wax badan ka ogaatid.
macruufka 9 Data Recovery: Sida loo soo ceshano Khasaaray Xogta laga macruufka 9 Qalabka
Top 6 qalabka si ay u gudbiyaan files ka iPhone in PC
Sida lagu Helo iPhone Ringer Dhibaatooyinka go'an
Sida loo Dayactir iPhone Backlight
Sida loo Waraaqda iPhone Xiriirada in CSV on PC / Mac
> Resource > iPhone > iPhone Arrimaha Amniga Waa in aan ogaado